Global Voices teny Malagasy » Mifamory mba hankalaza ny fahazoana miditra aterineto any Kambodza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Marsa 2011 16:51 GMT 1	 · Mpanoratra Sopheap Chak Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia
Ndeha hampanjavonina ny tsangambaton'ny fahaleovantena ao Phnom Penh mandritra ny ora vitsivitsy! Mino isika fa fitaovana manan-danja ny media sosialy amin'izao vanim-potoana izao, ary an-tànana izany fitaovana izany any Kambodza.
Izany no hafatra ho an'ny Andron'ny Zavona  izay hatao amin'ny Zoma 4 Martsa eo amin'ny tsangambaton'ny fahaleovantena izay mampiseho ny hetsika fanafahana tamin'ny Fanjanahantany Frantsay tamin'ny 1950 . Nambaran'i Nate Sovatha tamin'ny facebook ny fanasana.
Izao no hita ao amin'ny pejy fanasana:
Miha-manan-danja hatrany ny Fampielezam-baovao sosialy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy azo iadian-kevitra ny tombontsoa azo amin'ny fampifandraisana olona voasaraky ny sisin-tany. Nitana andraikitra lehibe dia ny fanovana ara-sosialy nandritra ny andro vitsivitsy farany teo tany amin'ny firenena sasany maneran-tany koa izy. Na eo aza izany lanjany izany, tsy ny olon-drehetra no manana io fitaovana io; ny firenena sasany nanakana ny fahazoana alalana amin'izany fitaovana lehibe izany. Amin'ny maha-mpikambana manana ny maha-izy azy amin'ny vondrom-piaraha-monina iraisam-pirenen'ny taon-jato faha-21, KAMBODZA DIA TSY ISAN'IREO FIRENENA IREO ARY TE-HANKALAZA IZANY IZAHAY. Izay ny mombamomba izy hetsika ity.
Ny hevitr'ity fihaonambe ity dia ny hankalazana ny hoe tsara ny fahafahana miditra amin'ny aterineto any Kambodza raha miohatra amin'ny firenen-kafa manana lalàna hentitra momba ny fanivànana fampielezam-baovao:
Andeha hifankahita amin'ny namanao sy ireo hafa mpampiasa fampielezam-baovao sosialy, hilaza tantara na haka sary fotsiny miaraka amin'ny tsangambato atao eo aoriana. Mba hanehoana ny firaisankinantsika sy ny firaisana ao anatin'ny vondrom-piaraha-monin'ny mpampiasa fampielezam-baovao sosialy, ndeha samy hanao AKANJO FOTSY (ambony sy ambany raha mety, raha tsy mety dia ambony fotsiny. Fotsy ranoiray, tsy misy soratra, kisarisary na hoatr'izany).
Mampitandrina ireo mpandray anjara ny mpikarakara mba tsy hampiasa an'io hetsika io amin'ny antony ara-politika no sady manantitrantira fa tsy tolona io hetsika io, ary miezaka tsy miresaka momba ny tolona any amin'ny firenena Arabo maro . Ankoatr'izay ary, nanasongadina ny endrika tsy misy politika an'ity fihaonambe ity ny mpikarakara no sady tonga saina amin'ny fanapahan-kevitra goavana avy amin'ny governemanta sy mahatakatra fa ny lalàna any Kambodza dia mila alalana ho an'ny fiihaonambe toa izany any amin'ny toerana antsoina hoe Kianjan'ny Fahalalahana :
Fanambarana: Ity hetsika ity dia tsy fihetsiketsehana na tolona. Mitaky alàlana ny lalàna aty Kambodza ho an'ny hetsika toy izao ary ilaina tontosaina any amin'ny toerana voafaritra mazava izany. TSY MANANA IZANY ALALANA IZANY AHO. Tsy hetsika ara-politika ity, ka aza ampiasaina amin'ny antony ara-politika azafady.
Hatreto amin'ny nanoratana an'ity dia mpampiasa Facebook 31 no nanamafy ny handraisany anjara. Na izany aza, azo antoka fa hisarika mpampiasa aterineto maro io hetsika io, izay handray anjara amin'ilay fihaonambe na dia tsy nanamafy ny fandraisany anjara tao amin'ny Facebook aza.
Na dia tsy resaka politika aza ity, ny hetsika karakaraina amin'ny alalan'ny fampielezam-baovao sosialy tahaka izao dia mety handrangitra ny governemanta, izay vao tsy ela no nandà fa tsy nibaiko ny fanasakanana  ny vohikala sasany izay miandany amin'ny mpanohitra na hita ho ratsy ho an'ny fitondràna; ary ireo mpitarika ao amin'ny governemanta koa dia nanameloka ampahibemaso  ireo mpanolotra vaovao izay mampitaha an'i Kambodza amin'ny toe-draharaha any Ejipta sy Tonizia.
Manomboka ny fanisàna ho an'ny Fampanjavonana ny Tsagambaton'ny fahaleovantenan'i Phnom Penh . Hosamborina ve ireo mpandray anjara amin'ity hetsika tsy ara-politika ity?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/05/14061/
 Andron'ny Zavona: http://www.facebook.com/video/video.php?v=1466680206936&comments#!/event.php?eid=164257580293069&notif_t=event_invite
 Fanjanahantany Frantsay tamin'ny 1950: http://www.infoplease.com/ipa/A0107378.html
 tolona any amin'ny firenena Arabo maro: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/
 Kianjan'ny Fahalalahana: http://www.straitstimes.com/BreakingNews/SEAsia/Story/STIStory_599272.html
 nanameloka ampahibemaso: http://www.cnv.org.kh/2011_releases/21jan11_kompongjam-hospital_comments.html
 Fampanjavonana ny Tsagambaton'ny fahaleovantenan'i Phnom Penh: http://cambopedia.com/2011/02/white-out-day-at-independence-monument.html